WD-40 sy microwaved tampons: zava-miafina ny sakafo sary nambara - News Fitsipika
WD-40 sy microwaved tampons: zava-miafina ny sakafo sary nambara
Izany ny asa ny sakafo stylist mba hanao vokatra mijery matsiro amin'ny fakantsary - na dia ny Makeover mandao ny sakafo inedible. Enina stylists milaza amintsika ny fitaka
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “WD-40 sy microwaved tampons: zava-miafina ny sakafo sary nambara” dia nosoratan'i Angelina Chapin, fa theguardian.com tamin'ny Alatsinainy 4 Janoary 2016 15.51 UTC
Ao ambadiky ny ankamaroan'ny sakafo matihanina sary dia stylist izay fitaka ny mpijery. Ireo fitaka isan-karazany avy amin'ny mikasika ny lokomena mba redden ny frezy, ny "milkshakes" vita amin'ny ovy nopotsehina. Tsy hoe sakafo stylists dia mpandainga sy mangalatra. Fotsiny ry zareo ao amin'ny raharaham-barotra ny improvisation.
Nandritra ny 10 ora mila, eo ho eo, hamita ny sary tsimoka, stylists dia antenaina hamaha izay nomena krizy teo no ho eo. No tzatziki amin'ny voatendry? Amboary amin'izay ny mayonnaise, na nokapohina fanosotra ao anaty vata fampangatsiahana. Ny mpanjifa te fa Torkia hoditra mba hijery ny "kely kokoa mena"? Tsara manana fandokoana sakafo amin'ny tanana.
"Rehefa mitifitra, tsy afaka mijanona ianao ka hanao hoe:: 'Hey, ugh, I nanadino izany,' "Hoy i Denise Stillman, ny Orange County-monina sakafo stylist izay no teto amin'ny raharaham-barotra ho an'ny 26 taona. "Ianao fotsiny mba ho azo antoka anao [mitondra ampy fitaovana amin'ny voatendry ho] manarona rehetra ny faladiany ary avy eo dia [manontania tena], 'Inona koa no afaka mandeha diso?' "
Fa tsy ny zavatra rehetra no faked. Ny vokatra ny mpanao dokam-barotra dia miezaka mivarotra matetika nasongadina, manazava Stillman. Rahoviana, ohatra, izy nitifitra ny dokam-barotra ho an'ny Breyers, izy nitifitra ny tena gilasy. Fa raha ny styling Gay izy Lea Foods 'nasainy nokapohina fanosotra, ny gilasy dia miorina an-tampon'ny azo atao na inona na inona - raha mbola toa matsiro.
Na mitifitra ny fahitalavitra ara-barotra na pirinty dokambarotra, ny sakafo stylist matetika ny tanjona dia ny hanamafisana ny ingredient ny hatsaran-tarehy voajanahary.
"Izaho toy ny volo sy ny makiazy ho an'ny sakafo,", Hoy Charlotte Omnès, ny stylist mipetraka any New York. "Rehefa hitanareo modely mandeha nidina ny fiaingana, tsy mijery toy izany. Fa rehefa mivoaka avy any makiazy, ianao toy ny, 'Wow.'"
Raha tianao ny sakafo Instagram sary mba hitovy Mazotoa homana fonony, dia efa nanangona mpanohana sasany toro-hevitra izay hanampy. Six sakafo stylists taminay ny zava-miafina mikasika ny fomba ho fady sakafo mijery vonona ny akaiky-dehibe.
Enchiladas: ovy nopotsehina manome ny endriky ny ampahany
Fa ny matsiro tarehy enchilada, hametraka nopotsehina ovy. Sary: Sary avy Rick Gayle. Food styling avy Kim Krejca.
Meksikana ny sakafo dia tsy ny tena photogenic. Tsy misy mahalala izany tsara noho Kim Krejca, ny Phoenix-monina stylist izay miasa amin'ny be dia be ny atsimo-tandrefana nahandro. "Enchiladas amin'ny saosy fandehanan-dra eo an-tsaramaso [dia] tsy tena hita maso mahafinaritra," Hoy izy. "Tsy maintsy manova izany, nefa mbola ho marina ho amin'ny sakafo."
Hanome ny enchiladas ny endriky ny bulkiness (araka ny hita etsy ambony), izy azy amin'ny indray mipi-maso nifanizina ovy nopotsehina, ny stylist ny handeha-ny famenoana satria mora ny hanao sy bobongolo. Ary Krejca nanampy hena sy veggies hatrany amin'ny faran'ny ny tortillas izay manokatra ny. Mba hamitana ny lovia, dia nampiasa ny hafanana basy mba hahatonga ny fromazy ketraka tsara eo an-tampony.
tacos: tarehy sponjy mitandrina ny akorandriaka misokatra
tacos: manandrana tarehy sponjy, lakaoly, ary WD-40. Sary: Sary avy Rick Gayle. Food styling avy Kim Krejca.
Eo amin'ny tena fiainana, tacos dia matsiro mikorontana. Mba hahatonga azy ireo hilamina eo amin'ny fakan-tsary, Krejca glued tortillas roa miaraka, ary nametraka tarehy sponjy ao ambadiky ny hena hitandrina ny akorandriaka misokatra. Fa maizina sy be ranony-tarehy hen'omby, dia nohosorany loko mainty ny sekely amin'ny volontsôkôlà saosy antsoina hoe Kitchen Bouquet, vita tamin'ny rano sy ny sakafo fandokoana. Krejca Ary sprayed ny famenoana amin'ny WD-40, ny zava-miafina fitaovam-piadiana mba hanao sakafo Meksikana glisten. Stillman mampiasa peppers mena eo amin'ny toerana ny diced voatabia ho matanjaka kokoa loko ary mandatsaka katsaka syrup amin'ny tsaramaso ka mijery mando sy vaovao.
Koba isan-karazany: ny volo ny lehilahy vokatra sy sunscreen ho lavorary 'ronono'
Moa ve ianao tia ny Koba isan-karazany, na amin'ny volo maina fanosotra? Sary: Sary avy amin'i Chris ao amin'ny Small Elinchev Pond Productions. Food styling amin'ny Tamara Kaufman.
Izany dia mety hanimba ny homana, fa ny ronono Koba isan-karazany ampiasaina amin'ny sary matetika sandoka. Koa satria ny zavatra tena haingana mahatonga cornflakes mijery soggy, sakafo stylists no tonga amin'ny fomba hafa. Ao amin'ity sary, Wisconsin-monina Tamara Kaufman nampiasa Wildroot, iray fotsy volo fanosotra ny lehilahy amin'ny sunscreen menaka fanosotra amin'ny hoditra-toy ny tapaka fa maro stylists mitsiriritra. Krejca Aleon'i taloha-sekoly fomba lakaoly fotsy, izay sary tahaka ny tena fifanarahana. Rehefa tena matihanina no mampiasa ronono, izany ihany no tena kely. Araka ny Michelle Rabin, ny Toronto-monina sakafo stylist, dia afaka mametraka ny tsara tarehy indrindra tapa-Koba isan-karazany tao anaty vilany feno legioma shortening dia hosaronany amin'ny manify ny ronono. "Ny shortening manohitra ny ranon-javatra, ary dia mijery toy ny vilia baolina rehetra dia feno kirihitra ny Koba isan-karazany," Hoy izy. "Ny farantsa hitoetra somary miavaka nandritra ny fotoana ela."
Kafe: drano teo saosy soja sy ny gelatin manome malamalama maso
Fa ny malama tarehy kafe, miezaka ny rano sy ny gelatin. Sary: Sary avy amin'i Beti Galton. Retouching amin'ny Ashlee Gray. Food styling amin'ny Charlotte Omnès.
Black kafe dia sarotra ny miasa miaraka noho ny tsara no vokatra Sheen. Ao anatin'ny latte na cappuccino, ny sombin-javatra dia haingana no lasa etona. Ao amin'ity sary, Omnès Nampiasa fitambaran'ny Kitchen Bouquet, ny rano sy ny gelatin mba hanome ny kafe iray malamalama maso. Ao amin'ny fiantraikany, Rabin dia ampiasaina nandena-midina saosy soja, ary indray mandeha tsy maintsy improvise amin'ny fanosotra sy ny gravy browner amin'ny napetraka ny marika malaza Canadian. "Hitako fa ny takelaka aho, ary niasa tamin'ny aho toy ny: 'Mampihomehy izany, satria tsy misy kafe,'" Hoy izy. Kaufman dia mampiasa ny tena fifanarahana rehefa azo atao izany, fa manampy mampisavoana ny rano manodidina ny savony paritra miaraka amin'ny eyedropper ny simulate labiera vaovao. The froth, stylists hoe:, matetika vita amin'ny savony nitsoka sodina sombin-javatra.
vorontsiloza: dia mety ho manta sy ny mpandatsa-drà ao anatiny, fa ny hoditra toa tsara
Undercooked Tiorkia Matetika no nasongadina ao amin'ny dokam-barotra. Sary: Sary avy amin'i Marshall Troy. Hampijoro styling amin'ny Grace Knott. Food styling amin'ny Charlotte Omnès.
Chef an-trano rehetra dia mahafantatra fa sarotra ny manao ny vorona crispy teo ivelany sy mando ny anatiny. Soa ihany, stylists sakafo ihany no mba hifantoka amin'ny aesthetics, izay midika hoe tsy tanteraka izy ireo mahandro iray. "Zava-dehibe tsy mba overcook azy ireo toy izany koa ny hoditra mijanona mitady mando, plump sy be ranony,"Hoy i Omnès. "Ary izao no sary fitadiavana fomba hampandraisana izay mahatonga ny vavanao rano rehefa mijery azy." New-York miorina stylist Brian Preston-Campbell milaza fa matetika Manatsatsika dimy na enina turkeys mandritra ny ora vitsivitsy tsirairay mba hahazo fa "mahery fo tanteraka vorona". "Mbola manta sy tsara fanahy amin'ny fandatsahan-drà ao anatiny," hoy izy. "Tsy Karazana nasty fa ny momba ny vokatra farany eo amin'ny sary."
Ao amin'ity tifitra, Omnès mipaingotra eo ny hoditry ny vorontsiloza izany dia tsy hamiravira amin'ny fanendasa-. Nilahatra izy ny vilany, ary ny vorona nifanizina tamin'ny rano-taratasy vonton lamba famaohana, ka dia mety etona fa tsy indray crispy. Mba hanatrarana izany Brown, nanjelanjelatra Jereo, dia nisosa ny vorontsiloza ny misy pentimpentina ny rano, Kitchen Bouquet sy ny vilia savony.
Gilasy na nasainy nokapohina fanosotra: shortening, katsaka syrup sy ny frosting
Frosting miampy icing siramamy manao mahatalanjona tarehy gilasy. Sary: Sary avy amin'i Marshall Troy. Hampijoro styling amin'ny Grace Knott. Food styling amin'ny Charlotte Omnès.
Raha gilasy no modely olombelona, izy no ho Diva. Ny tsindrin-tsakafo dia sarotra ny hamolavola, Ary raha tsy ianao styling amin'ny toerana refrigerated, miempo haingana. Mba hisorohana ny aretin'andoha, manam-pahaizana matetika mitodika any fangarony hafa. Mba hamorona ny "gilasy" teo amin'ny ankaviany, Omnès voaharo frosting amin'ny icing siramamy (ny cone eo ankavanana no tena fifanarahana), Fa ny tena fahita sandoka gilasy fomba fahandro dia ny fikambanan'ny legioma shortening, vovo-siramamy sy vary syrup.
Fa hafa milky tsindrin-tsakafo, stylists maro Hacks. Fa ny dollop ny nasainy nokapohina fanosotra, Omnès Nampiasa tsy ronono creamer fa "tsy Hianao na mitomany". Aleon'i Kaufman Barbasol niharatra fanosotra, fa an-tsoratra: "Ny vehivavy diso manaikitra nanandrana ny tsy faly." Fa milkshakes, Stillman mampiasa marikivy fanosotra satria ny matevina sy mora mikoropadropaka anatin'ny.
Drinks: fa frosty fitaratra? Tena price-on deodorant
Raha ny zava-pisotro tsara tsy ampy Sheen, Mitifitra fotsiny ny sasany deodorant eo amboniny. Sary: Alamy
Stylists aza mandany tena booze raha tsy ny dokam-barotra ho an'ny toaka. To ho Molotov, Fandokoana sakafo Omnès miharoharo amin'ny rano, hevi-petsin'i Kaufman koa ny mampiasa ny hamorona "chardonnay" avy voatsatso Kitchen Bouquet. Raha ny marina, ny rano mihitsy no sideshow. "Ny ampahany manan-danja indrindra momba ny Molotov dia ny fitadiavana fomba hampandraisana sary,", Hoy i Omnès - fitadiavana fomba hampandraisana toy ny ranomandry, fizz, ka manjary miboiboika sy ny froth. "izy ireo [manao ny zava-pisotro] jereo mamelombelona. "
Fa toy ny zava-pisotro mangatsiaka margaritas sy daiquiris, ny matihanina miantehitra ranomandry vovoka, potika gelatin fa jereo toy ny torotoro ranomandry rehefa nasiana rano. Sandoka koa izy ireo mampiasa plastika na acrylic ranomandry cubes, izay tsy Miempo ao ambaniny ny jiro sy ny fakan-tsary mafana vaseline teo amin'ny sisiny ny margaritas. To hamorona fanala, Stillman akanjo ny labiera mug amin'ny dipoavatra-on deodorant sy mampiasa fifangaroan'ny Scotchguard sy glycerin hanao zava-pisotro malefaka mijery ranomandry mangatsiaka amin'ny vakana ny condensation. "Tena manahirana raha tsy izany dia ho,"Hoy i Stillman. "Atỳ, dia afaka mifidy ny haavon'ny wetness eo amin'ny fitaratra. "
mafanan'ny paty: ditin-kazo manitra dia manome ny endriky ny etona
Izany fotoana etona avy paty mitsangana toy ny zavona nandritra ny tendrombohitra sarotra ny hisambotra ara-boajanahary eo amin'ny fakan-tsary. Kaufman manafina ny firapotsy foil fonosana ny etona poti paty ao anatin'ny vilia baolina, ary manampy ny rano mba hamoronana etona. Mba hahazoana vokatra mitovy, izy ihany koa ditin-kazo manitra, ary tatỳ aoriana jiro nesoriny ny tapa-kazon'i amin'ny Photoshop, raha tetika hafa tafiditra amin'izany ny sambo mandeha amin'ny akanjo na sigara setroka. By lavitra ny fomba mahaliana indrindra dia ny rano-vonton microwave tampons (landihazo baolina miasa ihany koa) ary handevina azy ambadiky ny lovia. "Manana azy tamin'ny fitaovana fotsiny raha toa,"Hoy i Kaufman. Na inona na inona ny teknika, Hoy izy etona tokony hotifirina foana hamely ny maizina fototra.
← 10 ny tsara indrindra Travel fampiharana Tipron: A Rolling anakandriamasoko Robot fandefasana [VIDEO] →